जनकपुरका मेयरले आफ्नो कार्यकक्षमै पत्रकारलाई कुटाए ! – मिथिला दैनिक
जनकपुरका मेयरले आफ्नो कार्यकक्षमै पत्रकारलाई कुटाए !
आफ्नो डेरामा बोलाएर अभद्र व्यवहार सहित 'साले, मादर...द' जस्ता आमा, बहिनीको गाली दिएका थिए ।
मिथिला दैनिक २३ पुष २०७६, बुधबार १०:०८
जनकपुरधाम, धनुषा । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले आफ्नै चेम्बर (कार्यकक्ष) मा पत्रकारलाई कुटाएका छन् ।
जानकी मन्दिर अतिक्रमण सन्दर्भमा सूचना माग्न गएका पत्रकारहरुलाई मेयर साहले आफ्ना कार्यकक्षमै कुटपिट गराएका हुन् । जानकी मन्दिरको फूलबारी अतिक्रमण सम्बन्धी बाईट र सूचना लिनका लागि नगरपालिका पुगेका सँचारकर्मीहरुलाई मेयरकै ईसारामा कुटपिट गरिएको हो ।
मेयर साहको कार्यकक्षमा बसेका उनका समर्थक तथा नगर प्रहरी मिलेर नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाका अध्यक्ष अनिल मिश्र, देशसञ्चार संवाददाता राजा झा, कान्तिपुर दैनिकका महोत्तरी संवाददाता अमरकान्त ठाकुर, सुभाष कर्ण, विकास साहलाई कुटपिट गरेको पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष अनिल मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।
कुटपिटबाट कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता ठाकुरलाई चोट लागेको छ । मेयर र उनका सहयोगीहरुले पत्रकारमाथि हेल्मेटले आक्रमण गरेपछि पत्रकारहरु घाईते भएका हुन् । नगरपालिकामा सूचना अधिकारी नभएको तथा सूचना मागको लागि निवेदन दर्ता गराएपनि कुनै सुनुवाई नभएपछि आफूहरु सूचनाको लागि नगरपालिकामै भौतिक रुपमा गएको बताउनुभयो ।
सूचना अधिकारी नभएको तथा सूचना पनि नदिने गरेको भन्दै जानकी फूलबारी अतिक्रमण सन्दर्भमा मेयरको विचार लिनको लागि मेयरको कार्यकक्षमा गएपछि उनीहरुलाई कुटन लगाएको मिश्रले जानकारी दिनुभयो । यसअघि मेयर साहले आफ्नै नगरपालिकामा कार्यरत एक अमिनलाई आफ्नो डेरामा बोलाएर अभद्र व्यवहार सहित ‘साले, मादर…द‘ जस्ता आमा, बहिनीको गाली दिएका थिए ।
सोमबार भएको जानकी मन्दिरको जग्गा नापीमा ४ फिट ५ ईन्च जग्गा अतिक्रमण भएको ठहर भएको छ । निजी घरलाई बचाएर जानकी मन्दिरको फूलबारी भत्काएको आरोप मेयर साह उपर लगाइएको छ ।
चीनबाट फर्काइएका नेपालीलाई संसद भवनमै राखौं : सांसद यादव
२१ माघ २०७६, मंगलवार १६:११